‘आफैले आफैलाई स्वीकार्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो’ – लेक्स लिम्बु « Khasokhas Follow @khasokhasmag
लण्डन निवासी २५ बर्षिय नेपाली मुलका चर्चित ब्लगर लेक्स लिम्बुले एउटा भिडियो सार्वजनिक गर्दै समलिंगी भएको खुलासा गरेका थिए । आफ्नो जीवन, परिवार र पहिचानका बारेमा मार्मिक भिडियो सार्वजनिक गर्दै उनले आफू समलिंगी भएको खुलासा गरेका हुन् । त्यसपछि उनले कस्तो प्रतिकृया पाइरहेका छन् ? के फरक अनुभव गरिरहेका छन् ? यसै सेरोफेरोमा खसोखाससँग लेक्स लिम्बुले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
आफू समलिंगी भएको खुलासा गर्दै भिडियो सार्वजनिक गरेपछि कस्तो प्रतिकृया पाउनुभयो ?
अहिलेसम्म सबैजसो प्रतिकृयाहरु सकारात्मक नै छन् । शायद आगामी दिनमा यसबारे फरक फरक खालका धारणाहरु आउँछन् होला । केही धारणाहरु मेरा लागि चुनौतीपनि हुनसक्छन् । तर अहिले भने सोंचेको भन्दा धेरै सर्पोटिभ कमेन्टहरु आएका छन् ।
तपाईले परिवार र साथीहरुलाई पहिले नै थाहा दिनुभएको रहेछ, तर अहिले सार्वजनिक रुपमै भन्दा कस्तो अनुभव भएको छ ?
त्यस्तै धेरै फरक अनुभव त केहीपनि भएको छैन । म आफैमा मान्छेपनि प्राइभेट नै हो । मेरा साथी र परिवारहरुलाई त पहिलेदेखि नै थाहा थिए । साथीहरुलाई अझ पहिले नै भनेकाले मलाई धेरै ठूलो भार बोकेर बसेको जस्तो अनुभव त थिएन । तरपनि मलाई यो कुरा लुकाउन मन थिएन । त्यसैले मैले सार्वजनिक रुपमा नै यो विषय भनेको हुँ । मैले सोंचेको भन्दा सकारात्मक समर्थन पाएको छु ।
बुबाआमाबाट कस्तो सर्पोट पाउनुभएको छ ?
मेरो बुबाआमाले धेरै सपोर्टिभ हुनुभएको छ । ममले त भिडियोमै पनि भन्नुभएको छ । भिडियो रिलिज गर्दा हामीले किंग्स कलेज लण्डनमा एउटा कार्यक्रम पनि गरेका थियौं । त्यसमा दर्शकले मेरो बाबालाई प्रश्नहरुपनि सोध्नुभएको थियो । अरु बाबाआमालाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ? के परिवर्तन हुन्छ ? भन्ने प्रश्नहरु आएका थिए । बाबाले परिवर्तन केही पनि नहुने बताउनुभयो । हिजो पनि हाम्रो छोरा थियो र आज पनि छोरा हुन्छ नै भन्नुभयो । मेरो आवाज र दृष्टिकोणले अरुधेरैलाई सजिलो बनाउन र साथ दिनका लागि मेरालागि मौका आएको छ भन्नुभयो । वास्तवमै केही गरेर देखाउनका लागि मलाई बाबापनि प्रेरणा मिलेको छ ।
तपाई त लण्डनमा हुनुहुन्छ तर नेपालमा समलिंगी भएर बाँच्न कत्तिको सजिलो छ ?
लण्डनमा पनि नेपालीहरु धेरै हुनुहुन्छ । छोराछोरीले अर्कै जातको केटा वा केटीलाई घरमा ल्याएर ब्वाईफ्रेण्ड वा गर्लफ्रेण्ड भनेर चिनाउँदा अप्ठ्यारो मान्ने बुबाआमाहरुसमेत हुनुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा आफ्ना छोराछोरी समलिंगी भएको थाहा हुनुले धेरै चुनौती जन्माउँछ । बेलायतमा बसेपनि कतिपय नेपाली परिवारहरुमा संकिर्णता छ । त्यसैले बेलायतमै पनि कतिपय व्यक्ति खुला हुन सकेका छैनन् । त्यसैले नेपाल र बेलायतमा संघर्ष त उस्तै उस्तै हो । लण्डनमा बस्दैमा कुनै व्यक्ति खुल्ला दिमागको हुन्छ भन्ने नै छैन । नेपालमा अझ गाह्रो हुनसक्छ । घर परिवार, समाजले अस्वीकार गरेमा म आफै पनि केही गर्छु भन्ने अठोट लिएर अगाडि बढ्न नेपालमा सबैका लागि गाह्रो पनि छ । तर हामीले समाजमा यो बहसलाई तीब्र पार्दै लगेमा भने सहज अवस्था आउनेछ ।
समाजमा भन्नु भन्दा पहिले आफैले आफैलाई स्वीकार्न कत्तिको गाह्रो छ ?
पहिले त आफूले आफैलाई स्वीकार्न सक्नुपर्छ । आफनो जिन्दगीसँग इमान्दार बनेर वास्तविक जीवन जिउनुपर्छ । समाजको बारेमा सोंच्नुअगाडि आफ्नो बारेमा सोंच्नुपर्छ । जब आफ्नोबारेमा सत्यको पहिचान हुन्छ, त्यसपछि इमान्दार जीवन बाँच्नुपर्छ । तपाईलाई कसरी आफ्नो जिवन बाँच्न मनपर्छ, त्यसरी नै बाँच्ने हो । सबैले सार्वजनिक रुपमा भन्दै हिड्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा आफैले आफैलाई स्वीकार्नु नै हो ।
हामीले एक अर्कालाई लिंगको आधारमा नभई माया, सम्मान र आत्मियताका साथ चिन्न सकौं । हामीले यी तीन चीजलाई दिमागमा राखेर सम्मान र समानतालाई महत्वदिनुपर्छ । मानवता नै सबैभन्दा ठूलो कुरो हो । मानवता रहेसम्म लिंगको कुराले हामीलाई विभाजित गराउन सक्दैन ।
नासोँको निर्णय : अतिविपन्न र दलितको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा
नासोँ गाउँपालिकाले अतिविपन्न र दलितको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने भएको छ । गाउँ कार्यपालिकाको पहिलो